KISMAYO-War qoraal ah oo kasoo baxay Gollaha Iskaashiga dowlad goboleedyadda dalka ayaa waxaa looga hadlay heshiis ay ka gaareen maamulka HirShabelle iyo dowladda Federaalka ah ee Soomaaliya khilaaf siyaasadeed oo dhex-yaaley.
Heshiiska ay gaareen Dowladda dhexe iyo maamulka ayuu Golluhu sheegay inaanu waxba ka bedali doonin mowqifkii ay horey u qaateen, kaasoo ay xiriirka ugu jareen Villa Soomaaliya, ayna muhiim tahay in la xaliyo tabashooyin ay qabaan.
Madaxwayne Maxamed Cabdi Waare oo la hadlay warbaahinta ayaa tilmaamay in talaabadani uu go'aan saday markii wax-garadka iyo aqoon-yahanyada reer HirShabelle ay shaaca ka qaadeen inay muhiim tahay in la hadlaan dowladda, taasoo uu sheegay in madaxda maamulada qaar aysan taasi dooneyn.
"Golluhu wuxuu si buuxda u gar-waaqsan yahay in dowlad goboleedka HirShabelle uu umadax banaan yahay ka tashiga iyo go'aan ka gaarista masiirka dowladeed iyo mid umadeed," ayaa lagu yiri qoraalka kasoo baxay Mashasha maamul goboleedyadda.
Bayaanka kasoo baxay Gollaha Iskaashiga Maamul Goboleedyadda ayaa tibaaxay in qaabka kaliya oo ay kusoo celin karaan wadashaqaynta dowladda Federaalka ay tahay in la yeeshaan wadahal miro dhal ah, kaasoo lagu lafaguro arrimaha taagan.
"Golluhu wuxuu madaxda sarre ee dowladda mar kale ku borrinayaa inay si dhab ah oo walaaltinnimo ah ugu soo jeesteen xalinta qadiyadda taagan. Taasoo ah wadahadal dhab ah," ayaa lagu yiri qoraalka kasoo baxay Gollaha Iskaashiga maamuladda.
Dowlada Federaalka gaar ahaan madaxda sare ayaa waxay horey u wiiqeen doorka aqalka...
AlShabaabkii laga saaray Shabeellaha Hoose oo 'u wareegay' HirShabelle
Soomaliya 16.09.2019. 22:07
Dib u dhac ku yimid Doorashada Madaxweynaha HirShabelle
Soomaliya 10.09.2017. 10:19